လောကမှာ ရှိရှိသမျှ ရနံ.အားလုံးထဲမှာ ကိုယ်ကျင်. သီလရနံ.ဟာ အနှိုင်းမဲ.ရနံ. ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို.လဲဆိုတော.ကိုယ်ကျင်.သီလရနံ.ထက်ပိုပြီး မွှေးပျံ.သင်းကြိုင်ပါတယ်၊ပျံ.နှံ.အား ကောင်းပါတယ်လို. နှိုင်းယှဉ်
စရာ၊ အစားထိုးစရာ၊ ထပ်တူပြုစရာ တခြားရနံ. မရှိတော.လို.ပါဘဲ။
ကိုယ်ကျင်.သီလ ရနံ.နဲ. လဲလှယ်သင်. လဲလှယ်ထိုက်တဲ.တခြားရနံ. လောကမှာမရှိတော.တဲ.အတွက်
ကိုယ်ကျင်.သီလရနံ.ဟာ အနှိုင်းမဲ.ရနံ.ဖြစ်ပါတယ်။ရနံ.ဆိုတာ မွှေးပျံ.သင်းကြိုင်တဲ.အနံ.၊ ကောင်းမွန်တဲ. အနံ.ကို ပြောတာပါ။ ပုပ်အက်နံစော်တဲ.အနံ.၊ ဆိုးဝါးတဲ.အနံ.ကို ရနံ.လို. ဘယ်သူမှမပြောပါဘူး။ နမ်းရှုရသူကို စိတ်ချမ်းသာစေတဲ.အနံ.၊ ကောင်းကျိုးဖြစ်စေတဲ.အနံ.က တော.အနံ.လို.တောင် သိပ်အခေါ်မခံရဘဲ ရနံ.လို.ဘဲ မြတ်နိုးနှစ်သက်စွာ အခေါ်ခံရပါတယ်။
ရနံ.တိုင်းမှာ သူ.ပင်ကိုသဘာဝနဲ.သူ မွှေးပျံ.သင်းကြိုင်တဲ.ဓါတ် ရှိပါတယ်။။ ပြီးတော. ပတ်ဝန်းကျင်ကို သူ.ရဲ. အမွှေးဓာါတ် ပျံ.နှံ.အောင် ဖြန်.တတ်တဲ.သတ္တိရှိပါတယ်။ဒါပေမယ်.ဘယ်ရနံ.ဘယ်လောက်ပဲ မွှေးမွှေး
လေအောက်ကို ပဲသက်ရိုးရှိပါတယ်။လေညာကို တက်ရိုးမရှိပါဘူး။ လေစုန် ကိုပဲဆင်းရိုးရှိပါတယ်၊လေဆန်ကို
ခွင်းရိုး မရှိပါဘူး။လေသင်.ရာပဲ မွှေးရိုးရှိပါတယ်၊ လေမသင်.ရာကို မွှေးရိုးမရှိ ပါဘူး။
ကိုယ်ကျင်.သီလ ဆိုတဲ. မွှေးရနံ.ကတော. လေအောက်ကိုလည်း သက်သလို-- လေညာကိုလည်း တက်ပါ
တယ်။ လေစုန်ကိုလည်းဆင်းသလို--- လေဆန်ကိုလည်းခွင်းပါတယ်။ လေသင်.ရာလည်း မွှေးသလို လေမသင်.
ရာလည်း မွှေးပါတယ်။ လေအောက်လေညာ၊ လေစုန်လေဆန်၊ ရှေ.နောက်ဝဲယာ၊ ထက်အောက်ဝန်းကျင်၊ အဆီးအတားမရှိ၊ အကန်.အသတ်မရှိ၊ မွှေးချင်တိုင်းမွှေး၊ပျံ.နှံ.ချင်တိုင်းပျံ.နှံ.နိုင်တဲ.အစွမ်းသတ္တိရှိတဲ.အတွက် ကိုယ်ကျင်.သီလရနံ.သာ အနှိုင်းမဲ.ရနံ. ဖြစ်ပါတယ်။
လောကမှာ မွှေးရနံ.ထွက်တဲ. အရာဝထ္ထုအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး အမြစ်ရနံ.၊အနှစ်ရနံ.၊အပွင်.ရံနံ.
လို.ဆိုပြီး ရနံ.သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ အမြစ်ရနံ.အားလုံးထဲမှာ အကျော်မြစ်ရဲ.ရနံ.ဟာ အမွှေးဆုံး၊ အနှစ်ရနံ. အားလုံးထဲမှာ စန္ဒကူးနှစ်ရဲ. ရနံ.ဟာ အမွှေးဆုံး၊ အပွင်.ရနံ.အားလုံးထဲမှာ မြတ်လေးပွင်.ရဲ. ရနံ.ဟာ
အမွှေးဆုံးလို. လောကလူသားတွေက သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။
တစ်လောကလုံးက အမွှေးဆုံးပါလို. သတ်မှတ်ထားတဲ. အဲ.ဒီအမြစ်ရနံ.၊ အနှစ်ရနံ.၊အပွင်.ရနံ.တွေ
အားလုံးဟာ ကိုယ်ကျင်.သီလရနံ.ရဲ. ရှေ.မှောက်မှာတော. ဒူးထောက်၊ လက်မြှောက်ပြီး အရှုံးပေးကြရတာ
ချည်ပါပဲ။ ဘာလို.လည်း ဆိုတော. အဲ.ဒီရနံ.တွေက လေညာကို ဆန်ပြီး ပျံ.နှံ.နိုင်စွမ်း မရှိလို.ပါ။
လေညာကို ဆန်တက်ပြီး ပျံ.နှံ.နိုင်စွမ်းရှိတဲ.ရနံ.က ကိုယ်ကျင်.သီလရနံ. တစ်မျိုးတည်း ရှိတာမို. ကိုယ်
ကျင်.သီလရနံ.ဟာ ပြိုင်ဘက်မရှိ အနှိုင်းမဲ.ရနံ. ဖြစ်ရပါတော.တယ်။
ဆရာတော် ဘုရား ရေးတဲ. စာအုပ်တော်တော်များများကို ကျနော်ဖတ်ခဲ.ဘူးပါတယ်။ စာအုပ်တိုင်းဟာ
အနှစ်သာရ ပြည်ဝ ကာ ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်ဖတ် သင်.ပါတယ်။ စိတ်ထည်းမှာ စွဲမြဲစွာ မှတ်သားနိုင်ပါက
အင်မတန်အကျိုးတရား ရစေမည် ဖြစ်သည်။ အမြဲ ဖတ်နေဖို.လိုတယ် အမှားတွေကင်းနိုင်ကြဖို.ပေါ.။
ဘ၀အရေးစိတ်အေးရဖို့ ဓမ္မအသိရှိလျှက်နေကြစို့။ ဓမ္မစကား နေ.တိုင်းကြားကစိတ်ထားဖွေး
သီလ စောင်.ငြား မလားပါယ်ရွာ
မြတ်သီလ စိတ်ချ ကိုးကွယ်ရာ
Posted by မောင်မောင် at 17:40